I-China i-Cable Assembly engenaManzi, isinxibelelanisi se-DC mveliso kunye nabenzi | Olink
Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu.
Ukuzibophelela kweCingo kweZithuthi
Izixhobo zonxibelelwano Ucingo H
Wokubopha Wire Vehicle Wire
Iindibano ze-HD HSD zeNdibano
Izixhobo Zokucoca Ingcingo
Iindibano zeCable Medical
Izixhobo zokuBamba iiMbane zokubopha
Indibano yeSensor Cable
I-Cable Assembly engenaManzi, iSinxibelelanisi seDC
Kwi-Car Audio ye-Car Bopha i-Cable Assembly 1
KwiNdibano yeeMoto eziMbiweyo zeMoto eziBophelekileyo
Ukhuseleko lweMoto ye-TMS yokuBopha i-Cable Assembly
Intambo yekhebula engenawo manzi
Inombolo yomzekelo: I-harness yeentambo zokubopha i-66
Indawo yokuQala: Olink
Ubungakanani: 1.5 USD
MOQ: 20 * 20 * 10 iisentimitha
SGS IATF16949, CE isiqinisekiso intambo
Igobolondo leplastiki: inayiloni PA66
Isiphelo: ubhedu obunciniweyo
Ucingo: isiseko sobhedu, ibhatyi yePVC
Ubushushu obulinganisiweyo: -25 kuye + 85 ° C
Intambo yokubopha: i-PVC, irabha, abicah
Ukusebenza rhoqo: 50 / 60Hz
Esebenzayo ngoku: 3A
Umbane osebenzayo: 250V AC / DC
Inqanaba lokudumba: 94V, VW-1, CSA FT1
Izihlanganisi zinokuba zi-TE, Molex, JST, Deutsch, Hirschmann, Delphi, FCI okanye ezifanayo.
2 Cables zingasebenzisa i-UL.CCC, i-CE.VDE, i-CSA, i-AS / i-NZ, i-PSE iqinisekisiwe.
Iisampulu zasimahla zinokubonelelwa emva kokuba ikowuteshini iqinisekisiwe.
Ulawulo lomgangatho olungqongqo olulandela inkqubo yolawulo lwe-ISO.
Zonke iimveliso ziyi-100% yovavanyo ngaphambi kokuziswa
Zonke iintlobo zeemveliso zethu zihambelana neROHS.
I-7 ODM / i-OEM yoku-odola, ukulingwa kwetyala kunye nentambo eyenziwe ngokwezifiso zamkelwe.
Iinjineli zethu zinamava angaphezu kwe-12years kuyilo lokubopha iintambo ukuze sikwazi ukusebenza nawe ukufumana isisombululo esifanelekileyo sokunganeli nje ukuhlangabezana neemfuno kodwa kunye neendleko zokulawula.
Uyilo lokuBophelela iiCingo
Intambo yokubopha intambo yenzelwe ukwenza lula ukwenziwa kwecandelo elikhulu, kwaye iyilelwe ngokusekwe kwiimfuno zejiyometri kunye zombane zezixhobo ekufuneka ifakwe kuyo.
Izixhobo zokubopha ngocingo zihlala zisetyenziswa kumzi mveliso we-elektroniki, kwishishini leemoto, ekwenziweni koomatshini bokwakha kunye nezixhobo zeshishini, kunye nasekwenzeni izinto ezimhlophe ezinje ngoomatshini bokuhlamba iimpahla kunye nezomisi, iifriji, kunye nezinye izixhobo zasendlini.
Uludwe lwentambo lwenza lula ukwakhiwa kwala macandelo makhulu ngokudibanisa iintambo kwiyunithi enye, okanye iiyunithi ezininzi, kufakelo "lokungena". Ngokubopha iingcingo ezininzi, iintambo, kunye neesassemblies kwihashe, i-OEM okanye isifaki inento enye yokufaka. Ukongeza, ukubopha ngocingo kuvumela indibano egqityiweyo ukuba ikhuseleke ngcono ngokuchasene nefuthe lokungcangcazela kunye nokushukuma, kwaye ngokunyanzela iingcingo ukuba zibe yinyanda engaguqukiyo, ukusetyenziswa kwesithuba kulungiselelwe.
Nje ukuba uyilo lusekiwe, inkqubo yokwakhiwa kwentambo yokubopha iqalisa ngophuhliso lwesikimu esisetyenziselwa ukwenza iphepha lokuvelisa kunye nebhodi yendibano yesixhobo sokubopha. Ibhodi yendibano, okanye ibhodi yephini, ngumzobo opheleleyo wehashe kwaye ubonakalisa onke amacandelo kunye nendawo ekuyo kwaye ikwasebenza njengebhentshi lomsebenzi wehashe. Iingcingo ezifunekayo zokubopha zinikezelwa kwi-reel master kwaye zinqunyulwa kubude obufunwayo kwaye zichongwe ngokuprinta okanye ukufaka iilebheli xa kukho imfuneko. Nje ukuba zisikwe kubude obufanelekileyo, iingcingo ziyahluthwa ukuze kuvezwe umqhubi ongafakwanga umoya kwaye emva koko kufakelwe naziphi na iitheminali okanye izindlu zokudibanisa. Ezi ngcingo kunye namacandelo ke zibekwa kwibhodi yepini kwaye ziboshwe kunye naziphi na iintambo eziyimfuneko, iintambo zekhebula, intambo yentambo, imikhono, iiteyiphu, iintambo zomtya osuswayo, okanye nayiphi na indibaniselwano yezi.
Ngaphandle komnqweno wokwandisa i-automation, ii-harnesses ze-wire, ngokubanzi, ziyaqhubeka ukwenziwa ngesandla ngenxa yeenkqubo ezahlukeneyo ezichaphazelekayo.
Egqithileyo I-Cable Assembly engenaManzi, i-DB 24pin Isinxibelelanisi
Okulandelayo: Isinxibelelanisi manzi To Cable DC
I-Cable Assembly yezeMoto
I-Cable Assembly ye-Elektroniki
I-Cable Assembly yesiXhobo seKhaya
Indibano yeCandelo loMthengi
Intambo ye-90 ° ye-USB kwii-IP67 eziNgenaManzi
Isinxibelelanisi manzi To Cable DC
I-TYPE ye-USB C KwiNdibano ye-PCB yeNdibano
I-J45-RJ45 i-Cable Assembly engenaManzi
I-Cable Assembly engenaManzi, i-DB 24pin Isinxibelelanisi
I-IP67 yeNdibano yokuSebenza kweNtambo yaManzi
ifowuni Ifowuni: (86) 13725088886
idilesi Hayi 19, Xinle Road, Xinle Industrial City, Maan Town, Huicheng, Huizhou, Guangdong, China (523000)
ibhokisi yeposi intengiso@olinktek.com